Sirdoon ama Wardoon – Waa Maxay Sirdoon, Waana Maxay Shaqada Sirdoonka? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
AkhriDiplomasiyadda & Dunidda
Previous post Sidee Loo Ogaan Karaa Dhallaanka Aan Wali Dhalan Dhimashadiisa?
July 21, 2020 at 5:42 am	— Reply
Sirdoonku mar waa laan amni sugidda ah oo halbowle u ah amniga gudaha iyo dibadaba. Haddii lagaa sirdoon adagyahayna si kasta oo aad awood u leedahay waa lagaa awood badan yahay. Go’aamada aad qaadanaysid oo ka dhabka ah caddowgaaga waxay ku xiranyihiin xog aasaasiga ah ee aad ka haysid. Haddii aadan xog ka hayn oo taada lahayo laga yaabee meel shalay laga guuray inaad weerarto. Sirdoonka waxaa loo qaybiyaa sida badan labo. Mid gudaha ah iyo mid dibadda ah oo halis badan. Door-roonaantooduna hadba waxay ku xirantahay xaaladda waddanku ku jiro.
Shaqada sirdoonku waa xog raadin. Xogtu aad ayeey muhiim ugu tahay qorshayaasha amniga. Fulinta hawl-gallada dibad iyo gudaba. La socodka dhaqdhaqaaqyada millatariga, dhaqaalaha, waxbarashada iyo arrimaha kale bulshada. Tan afraad waa daba galka.
Sirdoonku waa hawlgan qarsoon oo laga ilaaliyo in la ogaado amase laga shakiyo. Waxaa ka reebban fudaydka. Tayada qofka sirdoonka noqonaya waxaa ka mid ah: aqoonta afafka muhiim ka ah, kalsooni, lahaanshah awood dareen qarsi, xasuus badan oo geesi ah. Waxaa ka reebban kalsoonida xad dhaaf ka ah, waxaa ka reebban muujinta aqoonsigiisa dhabta ah iyo gelidda hawlo dheeraad ah oo aan loo dirin.
Hormarin arrimaha amniga iyo nabaddu waa lama huraanka horumarka. Jiritaanka waddan kasta si uu u sii jiro waa u muhiim sirdoonku. Waxaa looga dayin xoojin dahana waddankaaga. Nafhurnimada ay geesinimadu ku dheehantahay, ogaanshaha waxa hareerahaaga ka socda iyo horumarinta qorshayaasha amniga.